Famoronana asa eto Madagasikara Ilaina ny fiaraha-mientan’ny fanjakana sy ny tsy miankina
Lasibatry ny tsy fananana asa ny ankamaroan’ny tanora indrindra ireo tsy nahita fianarana eto Madagasikara.
Krizy miverimberina Mampikatso tanteraka ny toekarena
Tsy tsara ho an’ny firenena mihitsy ny krizy ary tsy handalo izany intsony i Madagasikara. Amin’izao fidirana amin’ny fihodinana faharoa izao dia tena ilaina ny filaminana sy ny fitoniana,
Firenena manankarena solika Manomboka mitady seha-pihariana hafa
Mampikaikaika ny maro hatrany ny fiakaran’ny solika eto Madagasikara ary hita ho tsy misy mihitsy ny fifaninanana amin’ireo mpamatsy ny solika izay mifanaraka mivarotra lafo hatrany.
Izy no fototry ny fampandrosoana ara-toekarena ary manome sary sahady ny tanjaky ny firenena iray. Araka izany dia manana ny anjara toerany lehibe eo amin'ny firenena iray ny vola ary rariny raha lazaina ho firenena manankarena ny firenena be vola. Ny firenena tsirairay avy dia manamarika ny volany amin'ny sary sy soratra mba hampiavaka azy ireo.
Famaritana ny sandam-bola sy vola
Ny vola dia vita amin'ny taratasy na metaly atontan'ny fanjakana, ary manan-kery ao amin'io tany io mba ho sandan'ny entana vidiana. Azo lazaina ho entam-barotra manokana izay mitana anjara asa hanaovana fifanakalozana ara-barotra ny vola (équivalent général). Ny vola izany dia fandrefesan-danja ahafahana mamaritra ny sandan’ilay entam-barotra. Ny fahasamihafan’ny lanja na ny vidin’ny entam-barotra kosa no nampiteraka ny atao hoe sandam-bola izay fomba fiantso iray ihany koa ny vola. Ny firoboroboan’ny tsena sy ny fifaninanana no nahatonga ny fisian’ny vola sy ny sandam-bola. Rehefa teraka ny vola dia nisy singa roa mazava ny amin’ny tontolon’ny varotra : ny entam-barotra sy ny sandam-bola. Araka izany, ny vola no atakalo amin’ny sandan’ny entam-barotra. Ny vola ihany koa no fitaovana enti-mandrefy ny fandaniana nanaovana ny entam-barotra.
Endrika isehoan’ny vola
· Vola metaly (monnaies divisionnaires) : ireo no fitambaran’ny vola madinika mifanakalo ao amin’ny firenena iray. Raha ny teto Madagasikara dia nisy ny ventisikirobo, iraimbilanja, 1Ar, 2Ar, 4Ar, 5Ar, 10Ar, 20Ar ary 50Ar
· Vola taratasy (monnaie fiduciaire): fitambaran’ireo vola taratasy ifanakalozana ao amin’ny firenena iray tahaka ny 100Ar, 200Ar, 500Ar, 1000Ar, 2000Ar, 5000Ar, 10 000Ar ary 20 000 Ar raha ny eto Madagasikara.
· Monnaie srupturale: taratasim-bola eny amin’ny banky (chèques), virement atao eny amin’ny banky, karatra fisitomam-bola.
Tsiahivina fa dia noharina tamin’ny volamena ny sandan’ny entam-barotra rehetra (étalon prix) ary izy no nanaovana fifanakalozana. Noho ny fandrosoan’ny famokarana sy ny fifanakalozana no nampiteraka ireo endriky ny vola ireo.
Tsy mbola nisy ny vola taloha fa takalo (troc) no nampiasaina tamin’izany. Zavatra mifanakalo amina zavatra no nataon’ny olona (ohatra: angady 1 atakalo amin’ny vary 10 kilao). Rehefa niroborobo be anefa ny tsena dia nitady fitaovana iray hanamorana ny fifanakalozana ny fiarahamonina. Tamin’izay no efa nanomboka nanao ny vola ary nifanindran-dalana ihany koa ny mahaizy ny entam-barotra (valeur). Mbola nandeha foana anefa ny takalo ary efa nanomboka nihasarotra (ohatra: omby iray atakalo amin’ny vary 300 kilao na lamba 100 m na angady 400). Nisy hatrany ny olana ary lasa sakana tamin’ny fampandrosoana ny fifanakalozana satria zavatra maro no tiana atakalo kanefa tsy misy ary tsy nahafa-po. Teo no teraka tanteraka ny vola izay ahafahana manana sy mahazo ny entana tiana hovidiana sy ifanakalozana (ohatra : angady 1= 5000 Ar).
Ny vola dia fitaovana enti-manao fifanakalozana (instrument d’échange) ka izy no manelanelana ahafahana mahazo entana na zavatra. Ankoatr’izay dia izy izany no hamaritana sy hanombanana ny mahaizy azy ny zavatra rehetra (étalon mesure) ifanakalozana misy eo an-tsena. Arakaraka ny hatsaran’ilay zavatra, dia manome vola betsaka ny olona iray mividy azy. Izy ihany koa dia azo ampiasaina amin’ny fotoana rehetra ka ahafahan’ny olona iray mitahiry ny fahefa-mividiny (reserve de valeur)
Fanamboarana vola (création monétaire)
Ny vola dia fitaovana iray tena ilaina amin’ny fampandehanana ny toekarena satria izy no manamora ny fifanakalozana. Ny baingam-bola (masse monétaire) mivezivezy no hiafaran’ny fahefa-mividin’ny mpisehatra mikirakira vola amin’ny fotoana voafetra. Ny fitomboan’io dia midika fa misy fitomboan’ny harinkarena satria miroborobo ny fifanakalozana. Manana anjara asa lehibe amin’ny fanamboaram-bola ny banky. Rehefa tsy ampy mantsy ny fahefa-mividy amin’ny olona iray hanjifany ny zavatra ka mitady vola hafa amboniny izy dia manome alalana sahady ny banky hanamboatra vola. Omen’ny banky ny vola ilaina amin’ny alalan’ny fanomezana trosa, ary io trosa io no miteraka fanamboaram-bola (le crédit est l’instrument de la creation monétaire). Araka izany dia ny banky no mpisehatra voalohany amin’ny fanamboaram-bola amin’ny alalan’ny trosa. Ny banky foibe kosa anefa no mandefa ny vola taratasy sy mamatsy ireo banky ara-barotra mpanome trosa ireo ary manara-maso ny baingam-bola mivezivezy.
Fahalebiazan’ny Dolara sy ny Euro
Hatreto aloha dia manjakazaka hatrany ireo vola vahiny ireo maneran-tany. Raha ny Ariary eto Madagasikara no asian-teny dia tsy mbola tafarina mihitsy manoloana ireo vola vahiny fampiasa manerana an’izao tontolo izao ireo. Ny Malagasy anefa tsy maintsy manondrana sy manafatra vokatra ary tsy maintsy mampiasa ireny vola vahiny ireny. Noho ny sandam-bola ambany dia hita ho sahirana hatrany ary fatiantoka mandrakariva no sedrain’i Madagasikara, indrindra amin’ny resaka tsena iraisam-pirenena.